Mpampahatsiaro an'i Çiğli dia mahatsiaro ireo mpianatra ao amin'ny Weather Weather RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka35 IzmirNy kaominin'i Çiğli dia tsy nanadino ireo mpianatra amin'ny Weather Weather
09 / 01 / 2020 35 Izmir, Côte d'Ivoire Tiorka, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA
cigli municipality tsy nanadino ireo mpianatry ny oniversite amin'ny andro mangatsiaka
Ny ben'ny tanàna Cigli Utku Gumrukcu, Izmir Katip Celebi University mandritra ny fanadinana farany mba hanohanana ireo mpianatra hahatratra ny filàna fitaterana sy fizarana lasopy mafana nodidiana.
Ny Ben'ny tanànan'i Çiğli Utku Gumrukcu dia nanomboka fandinihana mba hahazoana antoka fa tsy nandeha an-tongotra iray kilometatra niala an'i Izkent Egekent tao amin'ny toeram-pianarana nandritra ny fanadinana farany ny mpianatra Izmir Katip Celebi. Nanome ny fizarana lasopy mafana tany amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny filoham-pirenena nandritra ny famaranana mba hanafana ny atin'ny mpianatra amin'ny andro mangatsiaka. Fahatsiarovana fa miara-miasa amin'ny oniversite İzmir Katip Çelebi, izay iray amin'ny oniversite manan-danja ao İzmir, amin'ny lohahevitra maro ary nanao sonia protocole maro izy ireo. Dr. Manana fifandraisana tsara isika miaraka amin'i Saffet Köse, fitantanan'ny oniversite ary mpianatra. Ny torohevitra ara-pianarana any amin'ny oniversite foana no ataontsika isaky ny asa izay tadiavintsika. Ankoatr'izay, amin'ny maha-tanàna antsika, dia manandrana manome izay ilain'ny oniversite isika sy ireo mpianatra ao anatin'ny manampahefana antsika. Amin'izao fotoana izao, ny olana lehibe indrindra dia ny elanelan'ny Izban Egekent Station sy ny campus. Miara-miasa akaiky amin'i Izmir Metropolitan Municipality izahay mba hamahana ny olan'ny gara. Saingy, nandritra ny fanadinana farany dia nametraka sidina an-tsambo izahay teo anelanelan'ny fivoahan'ny Izat Egekent Duragi Balatcik Neighborhood sy ny toeram-pianarana mba tsy hisian'ny hatsiaka. Izahay dia mitondra ny mpianatra mandritra ny adiny roa amin'ny maraina ary adiny roa amin'ny tolakandro ”.
Filohan'ny Gümrükçü: "Ny lasopy mafana mahasarika"
Ny fampahatsiahivana fa nanomboka nanangana lasopy mafana izy ireo mba hanomezana rano ireo mpianatra noho ny hatsiaky ny toetr'andro dia nanohy ny teniny ny filoha Customs: Ny mpandrindra ny fahazoan-dàlana anay nizara tany amin'ny campus. Manana fomba fihevitra mafonja sy be fiahiana izy ary mankasitraka azy aho. Androany, maraina, niverina tany amin'ny fijanonan'i ekzban aho niaraka tamin'i andzban ary niditra tao amin'ny mpianatra. Niresaka momba ny zavatra ilainao izahay. Tiako ny hanome lasopy azy ireo. Sekretera jeneralin'ny oniversite Andriamatoa Nurettin Memur sy Assoc. Nandray anay i Yasin Bulduklu. Niaraka lasopy tamin'ny mpianatra izahay. ”
Misaotra avy amin'ny mpianatra
Studentszmir Katip Çelebi University dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny serivisy peratra sy ny serivisy mafana. Nilaza ny mpianatra, nedeniyle Noho ny financinay dia mianatra izahay mandra-maraina. Nandritra ireo andro ireo izay nangatsiaka be ny andro, nandeha an-tongotra iray kilometatra taorian'ny fijanonan'ny Izban izahay. Faly tokoa izahay nahafantatra fa nampiditra ny serivisy hatramin'ny herinandro lasa teo. Teo ambonin'io, nisy lasopy mafana nafanaina. Misaotra indrindra an'i Utku Ben'ny tanàna izahay ”.
TÜVASAŞ 19 dia tsy nanadino ny andro Veterans tamin'ny Septambra 2012
Olympos Teleferik dia tsy nanadino ny ankizy nandritra ny fialan-tsasatry ny semester
Demirspor tsy nanadino ilay mpilalao baolina teo aloha
Diaben'ny 18 Isika Tsy Afaka Manadino Ny Fandresena Çanakkale
Asphalt cold cold
Filoha Ahmet Soğuk: Nahazo fandrahonana ho an'i TÜVASAŞ mihitsy aza aho! "
Fiainan'ny rely mangatsiaka
Mitohy ny asan'ny tarika na dia eo aza ny hatsiaka
Kilaometatra kilaometatra no nahatonga ny fery vy tamin'ny faran'ny İZBAN
Izbena Alina amin'ny andro mangatsiaka
YHT dia mamaky ny rakitsoratry ny mpandeha noho ny hatsiaka sy ny orana
Ny BTK Railway Line Works, ny fihenan'ny lanezy sy ny hatsiaka
Ny serivisy fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ny loharano mafana sy mangatsiaka dia nanomboka
Safkar Ege Refrigeration Air Conditioning Kely Meteo Tes.İhr.İth.A.Ş
Fivoahana Izban Egekent
Fiantsonan'ny Egekent İzban
Izba Egekent Bus Stop
Serivisy amin'ny serivisy avy amin'ny Izban Egekent Station
University of İzmir Katip Çelebi
Ny fanadinana farany an'ny Katip Çelebi University